Raharaha Ara-pitsarana Momba ny Vavolombelon’i Jehovah | Diary 2014
Nandidy ny Kristianina ny apostoly Paoly hoe: “Tsarovy ireo mifatotra any am-ponja, toy ny hoe miara-mifatotra aminy ianareo.” (Heb. 13:3) Mpanompon’i Jehovah isika ka mahatsiaro ny rahalahy sy anabavintsika foana, sady mivavaka “ho an’izay rehetra mitana toerana ambony, mba hananantsika fiainana tony sy milamina hatrany, ao anatin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra sy ny fahamendrehana tanteraka.”—1 Tim. 2:1, 2; Efes. 6:18.
Ireto ny sasany amin’ny raharaha ara-pitsarana momba ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny taon-dasa:
Niezaka nampitsahatra ny asantsika foana ny Eglizy Ortodoksa sy ny manam-pahefana sasany any Rosia. Na izany aza, dia “tsy nitsahatra nampianatra sy nitory ny vaovao tsara” ny rahalahintsika any. (Asa. 5:42) Nanao lalàna ny fanjakana mba hiadiana amin’ny fampihorohoroana, nefa lasa nampihariny tamin’ny gazetintsika sy ny rahalahintsika izany. Nilaza ny fitsarana rosianina fa misy fanazavana “mampidi-doza” ny 70 amin’ny bokintsika, ka nosokajin’ny fanjakana ho anisan’ny boky voarara. Noho izany, dia nanao bemidina tany amin’ny Efitrano Fanjakana sy tany amin’ny tranon’ny rahalahintsika ny manam-pahefana sasany mba hitady an’ireo boky ireo. Vavolombelona maro no nosamborin’ny polisy satria nitory, ary nalaina ny sariny sy ny peta-tondrony. Matetika koa no norahonana izy ireo tany amin’ny paositry ny polisy.
Rahalahy sy anabavy 16 no notsaraina tany Taganrog, nanomboka tamin’ny Mey 2013, satria nandamina fivoriana, nivory sy nandray anjara tamin’izany, ary nitory. Nomelohina ho toy ny mpanao heloka bevava izy ireo satria nanao zavatra nifanaraka tamin’ny finoany. Izay vao nisy an’izany hatramin’ny naharavan’ny Firaisana Sovietika. Misy manam-pahefana any amin’ny tanàna hafa mitaky ny fitsarana mba hiampanga ny bokintsika hoe “mampidi-doza.” Tiany koa raha melohina ho mpanao heloka bevava ny rahalahintsika, satria mankahala fivavahana hafa, hono.
Mbola tsy misy mangirana ny fiainan’ny rahalahy sy anabavy any Érythrée. Nisy 52 no nigadra tamin’ny Jolay 2013, ka anisan’izany ny rahalahy valo, izay tsy latsaka ny 70 taona, sy ny anabavy enina. Efa hatramin’ny 24 Septambra 1994 ny Rahalahy Paulos Eyassu sy Isaac Mogos ary Negede Teklemariam no nogadraina noho izy ireo tsy nety nanao miaramila.
Migadra ao amin’ny fonja Meiter, any an-tany efitra any avaratr’i Asmara renivohitra, ny antsasany mahery amin’ireo voafonja. Nisy 25 ny rahalahintsika nampijalin’ny manam-pahefana, tamin’ny Oktobra 2011 ka hatramin’ny Aogositra 2012. Natao tao anaty trano fanitso izy ireo ary nalevina tao anaty tany ny tapany ambany amin’ny vatany. Avoakan’ny mpiambina izy ireo amin’ny antoandro, rehefa main-tany, satria mafana loatra ao anatin’ilay trano fanitso. Tsy ampy sakafo sy rano anefa izy ireo, ka tsy tomombana ny fahasalamany. Indrisy fa izany no nahafaty ny Rahalahy Yohannes Haile, izay 68 taona, tamin’ny Aogositra 2012, sy ny Rahalahy Misghina Gebretinsae, tamin’ny 2011.
Tsy Manaiky Hanao Fanompoana Sivily Misy Ifandraisany Amin’ny Ady
Jereo ny Isaia 2:4 sy Jaona 18:36.
Nanome rariny antsika ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona tamin’ny 27 Novambra 2012, tamin’ilay raharaha Khachatryan sy ny Hafa miady amin’i Armenia. Vavolombelona 17 mantsy no nomelohin’ny fanjakana, satria tsy nety nanao fanompoana sivily teo ambany fahefan’ny miaramila. Nandoa onitra i Armenia ary nonerany koa izay lanin’ireo rahalahy tamin’ilay fitsarana.
Efa nahazo rariny isika tamin’ilay raharaha Khachatryan sy ilay hoe Bayatyan miady amin’i Armenia, ary ireo raharaha hafa tatỳ aoriana. Mbola nomelohin’i Armenia foana anefa ireo tanora Vavolombelona tsy nety nanao an’ilay fanompoana sivily eo ambany fahefan’ny miaramila. Niova anefa izany tatỳ aoriana. Nangataka ny hanitsian’ny antenimiera an’ilay Lalàna Momba ny Fanompoana Sivily mantsy ny fanjakana, tamin’ny 8 Jona 2013. Angamba tsy hisy intsony ny fanompoana sivily hofehezin’ny miaramila. Nafahana daholo ireo Vavolombelona nogadraina, tamin’ny 12 Novambra 2013. Nahazo alalana hanao fanompoana sivily koa ireo tanora Vavolombelona nanao fangatahana hanao izany.
Rahalahy 602 no nigadra tamin’ny 31 Oktobra 2013. Vavolombelona 17 605 no nogadrain’ny manam-pahefana tany nanomboka tamin’ny 1950, satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nahatratra 34 184 taona ny sazin’izy ireo raha atambatra.
Vavolombelona maro, teo aloha, no nampiarahina efitra figadrana tamin’ny mpanao heloka bevava, na jiolahy raindahiny mihitsy aza. Nisy solontena vitsivitsy anefa nankany amin’ny lehiben’ny fonja any Korea mba hangataka ny hanasarahana an’ireo rahalahy tamin’ny voafonja hafa. Tonga dia nosarahina tamin’ireo mpanao heloka bevava àry ny ankamaroan’izy ireo. Lasa natambatra tsiefatrefatra na tsidimidimy isaky ny efitra izy ireo, tamin’ny Aprily 2013. Inona no vokatr’izany?
Hoy ny rahalahy iray: “Voaro amin’ny fitondran-tena maloto izahay ary tsy maheno teny ratsy intsony.” Hoy koa ny iray: “Afaka mifampahery izahay izao, sady afaka mandamina fivoriana dimy isan-kerinandro.”
Rahalahy 56 no nakarina fitsarana sy nampandoavina lamandy ary notanana am-ponja vonjimaika. Miaramila fiandry mantsy izy ireo taloha nefa lasa Vavolombelona, ka tsy nety intsony rehefa nantsoina hanao miaramila. Voantso imbetsaka izy ireo isan-taona, nandritra ny valo taona. Tsy ara-drariny ilay izy ka mafy be ny miatrika azy.
Migadra telo taona sy telo volana any amin’ny fonjan’ny miaramila ny rahalahy 12, nefa efa imbetsaka izy ireo no nangataka ny hanao fanompoana sivily ho solon’ny raharaha miaramila. Ny rahalahy iray kosa migadra herintaona satria tsy mety hatao miaramila fiandry.
Rahalahy sivy no migadra satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Migadra herintaona sy tapany na roa taona izy ireo, ary matetika no kapohin’ny mpiambina sy ny miaramila sady tsy ananany antra. Rehefa afahana izy ireo, dia matetika no melohin’ny manam-pahefana indray ho “mpanao heloka bevava raindahiny”, ka ampidiriny any amin’ny fonja mazana kokoa. Efa nandefa fitarainana any amin’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona izao ny mpisolovavan’ireo rahalahy folo.
Tsy Mety Manao Fombafomba Mampiseho Fitiavan-tanindrazana
Jereo ny Daniela 3:16-18.
Tanzania: Afaka nianatra indray ireo tanora Vavolombelona, rehefa hita hoe tsy diso
Ankizy 5 no noroahin’ny sekoly iray ary 122 hafa no tsy navelany hianatra, satria tsy nanaiky hanao hiram-pirenena. Samy nahita anefa ny tao amin’ny Fitsarana Ambony any Dar es-Salaam, ilay fitsarana ambony indrindra any Tanzania, fa tsy nety ny nataon’ilay sekoly. Nilaza ilay fitsarana, tao amin’ny didy navoakany tamin’ny 12 Jolay 2013, fa tena manaraka ny zavatra inoany ireo ankizy Vavolombelona ireo, ary manan-jo hanaraka ny feon’ny fieritreretany sy ny fivavahany. Nanome voninahitra ny anaran’i Jehovah izy ireo, satria tapa-kevitra ny tsy hivadika taminy. Lasa afaka manaraka ny fivavahany an-kalalahana koa izao ny Vavolombelona any Tanzania.
Fahalalahana Haneho Hevitra
Jereo ny Asan’ny Apostoly 4:19, 20.
Nanao fanadihadiana ny Biraom-paritra Momba ny Raharaha Ara-pivavahana, ary nilaza fa “mampidi-doza” ny bokintsika sasany satria mampisara-bazana ny fiaraha-monina sy ny fivavahana, hono. Nanao bemidina tany amin’ny tranona Vavolombelona iray ny polisy tany Karabalyk, tamin’ny 6 Aprily 2013, nefa tsy nahazo alalana akory. Nisy fivoriana tao tamin’izay ary nalain’izy ireo ny bokintsika. Neken’ny Fitsarana Momba ny Toe-karena any Astana, tamin’ny 3 Jolay 2013, ny handrarana ny bokintsika folo. Mbola voafetra ihany àry ny boky azontsika hafarana. Tsy vitan’izay fa nanomboka nisambotra sy nanameloka ny rahalahintsika ny manam-pahefana, tamin’ny Desambra 2012, satria hoe tsy ara-dalàna ny asa fitoriana ataony. Tamin’ny 28 Martsa 2013, dia nandidy ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kazakhstan ilay biraom-paritra mba hilaza amin’ny Vavolombelona any, fa voarara ny mitory ivelan’ny trano fivavahana. Rahalahy sy anabavy 21 no nakarina fitsarana, tamin’ny Jolay 2013.
Fahalalahana Hanao Fivoriana sy Fivoriambe
Jereo ny Hebreo 10:24, 25.
Nila nosoratana ara-panjakana indray ny Fivavahan’ny Vavolombelon’i Jehovah tany. Tsy nanaiky hanao izany anefa ny Komitim-panjakana Misahana ny Fikambanana Ara-pivavahana, tamin’ny Janoary 2010, satria nisy diso, hono, ilay taratasy fangatahana. Efa nahitsin’ireo rahalahy imbetsaka ilay zavatra nolazaina fa diso, nefa mbola tsy nekena ihany. Nampakarin’izy ireo tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina àry ilay raharaha tamin’ny 31 Jolay 2012. Nolazainy tao fa tsy nanaja ny zontsika hanaraka ny fivavahantsika ny fanjakana, satria tsy nanaiky ny hanoratra ny fivavahantsika ho ara-dalàna izy ireo nefa tsy misy antony marim-pototra akory. Tsy manana zo ara-dalàna ny fivavahantsika, raha tsy voasoratra ara-panjakana indray.
Fiarovana ny Olona sy ny Fananany
Jereo ny Filipianina 1:7.
Afaka manaraka ny fivavahany an-kalalahana ny Vavolombelon’i Jehovah any. Iharan’ny herisetra anefa izy ireo indraindray, na misy mandoro sy manimba ny Efitrano Fanjakana. Tsy raharahain’ny polisy akory izany, ka lasa mahazo vahana ny mpanohitra. Nihamaro àry ireo rahalahintsika niharan’ny herisetra tamin’ny 2012 sy 2013. Trano 5 no nisy nanimba sy nandoro tamin’ny 2010 nefa lasa 15 izany tamin’ny 2011, 50 tamin’ny 2012, ary 23 tamin’ny Janoary ka hatramin’ny Mey 2013. Nandefa fitarainana tany amin’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona àry ny biraon’ny sampana.
Ukraine: Miomana hanorina an’io Efitrano Fanjakana io ny rahalahintsika, satria nisy nanimba sy nandoro izy io
Jereo ny Asan’ny Apostoly 5:29 sy Asan’ny Apostoly 15:28, 29.
Voatifitra imbetsaka i Pablo Albarracini tamin’ny 2012, satria sendra teo amin’ny toerana iray saika nisy nandroba. Tsy nahatsiaro tena izy ary nentina haingana tany amin’ny hopitaly. Efa nanao sonia karatra iray izy mampiseho hoe tsy manaiky fitsaboana ampiasana ra. Neken’ny hopitaly ny fanapahan-keviny, nefa nisy havany tsy Vavolombelona nangataka tany amin’ny fitsarana mba hamoaka didy hoe tsy maintsy ampidiran-dra izy hamonjena ny ainy. Nomba an’ny Rahalahy Albarracini ny Fitsarana Tampony ao Arzantina, ary nilaza fa manana zo hifidy izay fitsaboana tiany izy na dia tsy mahatsiaro tena aza. Tsy nampidiran-dra izy ary sitrana soa aman-tsara. Misaotra an’i Jehovah izy nanampy azy tsy hivadika.
Iharan’ny Fanavakavahana Ara-pivavahana
Jereo ny Lioka 21:12-17.
Nosimban’ny olona indroa ny Efitrano Fanjakana tany Toktogul, ary nanome rariny an’ireo rahalahy ny fitsarana tamin’ny 16 Aprily 2013. Nomelohin’ilay fitsarana ireo olon-dratsy ary nasainy nandoa onitra. Efa tsaraina izao ireo olona tena tompon’antoka tamin’ilay fanimbana voalohany, ka manantena ireo rahalahy fa tsy hisy intsony ny toy ireny. Tsy maintsy hanorina an’ilay Efitrano Fanjakana indray izao ny fiangonana.
Kirghizistan: Efa indroa ity Efitrano Fanjakana ity no nosimban’ny olona
Raharaha niadian-kevitra: Tsy maintsy mahazo alalana ve ny fivavahana iray vao afaka mandamina fivoriana sy fivoriambe?
Didy nivoaka: Nilaza ny Fitsarana Momba ny Lalàm-panorenan’ny Federasionan’i Rosia, tamin’ny 5 Desambra 2012, fa manan-jo hanaraka ny fivavahany an-kalalahana ny olona any, araka ny lalàm-panorenana. Namoaka didy koa ilay fitsarana fa afaka mivory ireo rahalahy, na dia tsy mangataka alalana na milaza amin’ny manam-pahefana aza.
Raharaha niadian-kevitra: Manana zo tsy hampiseho olon-kafa ny antontan-taratasy momba ny fitsaboana azy ve ny olona? Zava-nitranga: Nandidy ny hopitaly rehetra tany Saint-Pétersbourg, any Rosia, ny manam-pahefana iray tamin’ny 2007, mba hanome azy ny antontan-taratasin’izay Vavolombelona tsy manaiky hampidiran-dra, ary tsy hiera amin’ny tompon’ilay taratasy. Tsy niaro ny zon’ny marary ny fitsarana rosianina, ka nandefa fitarainana tany amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona ireo rahalahy.
Didy nivoaka: Namoaka didy ny Fitsarana Eoropeanina, tamin’ny 6 Jona 2013, fa tsy nanaja ny zon’ny olona hanana ny fiainany manokana ilay manam-pahefana. Nilaza koa izy io hoe tsy nisy “antony marim-pototra” tokony ho nampisehoana an’ireo antontan-taratasy manokana ireo tamin’ny manam-pahefana. Io didy io no manan-kery. Na dia nangataka ny handinihana indray an’ilay raharaha aza mantsy i Rosia, dia tsy nanaiky hanao izany ny Filan-kevitra Ambony Indrindra ao amin’ny Fitsarana Eoropeanina, tamin’ny 7 Oktobra.—Avilkina sy ny Hafa miady amin’i Rosia.
Tohin’ireo Raharaha Ara-pitsarana Tany Aloha
Neken’ny fitondrana any Frantsa ny didy navoakan’ny Fitsarana Eoropeanina tamin’ny 5 Jolay 2012. Tsy ara-drariny mantsy ny hetra notakin’izy ireo tamintsika. Nanonitra ny vola rehetra nalainy izy ireo, nanome zana-bola, ary nandoa an’izay lany tamin’ilay raharaha ara-pitsarana. Nesoriny koa ny antoka rehetra nataony tamin’ny fananan’ny sampana.—Diary 2013, pejy 34.
Mbola voasedra foana ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny faritra samihafa any Inde. Tsy nosamborina na nampangaina hoatran’ny taloha intsony anefa izy ireo. Raharaha 20 eo ho eo no efa nalefa any amin’ny fitsarana mba hamahana an’io olana io, fa mbola miandry valiny.—Diary 2013, pejy 35.